Date My Pet » 5 Hevitra, vokatr'izany Romance
5 Hevitra, vokatr'izany Romance
Last nohavaozina: Feb. 18 2020 | 3 min namaky
Fifandraisana vaovao mampientam-po foana, mahafinaritra, ary entanim-pitiavana. Na izany aza maro ny fahatsapana ny nihena ny pitiavana sy ny filan'ny nofo toy ny fotoana mandroso. Raha hitanao ny famantarana voalohany ampy, dia ireto misy zavatra dimy azonao atao mba Perk ny olon-tiany, ary vokatr'izany ny kilalaon'afo:
1. Notes miafina
Andramo ka ho zara-tsoratra ao amin'ny tsy ampoizina fitiavana toerana ho an'ny namanao ny mahita amin'ny kisendrasendra na ny fotoana nandritra ny andro ny. Mitete ny hafatra eo amin'ny mpiara-miasa ny kitapo vao mitodi-doha avy ny asa, dia hatsaraina ny ny andro fiasana, ary mahatonga azy ireo manantena ny hahita anao rehefa avy miasa. Asio taratasy fohy fitiavana ao amin'ny entany alohan'ny hamela ny saran-dalana, ny famelana azy ireo hahafantatra anao Hotsaroantsika izy ireo, ary tsy afaka miandry intsony izy ireo hiverina an-trano. Soraty 'Tiako ianao’ na manaova fo amin'ny etona ny efitra fandroana fitaratra ho amin'ny manaraka ny namanao maka fandroana. Pin ny taratasy ho any amin'ny windshield ny havanao ny fiara ho amin'ny manaraka dia tsy maintsy mihazakazaka mitondra teny.
Handeha ho amin'ny kilaometatra fanampiny amin'ny alalan'ny fampahatsiahivana ny manan-danja amin'ny fomba malefaka hafa ny antony manan-danja izy ireo dia mety ho anao Tena hanampy anao, rehefa niezaka nanorina indray ny olon-tiany eo amin'ny fifandraisanareo. Dia tsy hamela ny hafa Fantatro fa mieritreritra ny azy ireo, fa ianareo kosa hijanona ao ny heviny mandritra ny tontolo andro ihany koa.
2. Get More Ara-batana
Tsarovy ny fiandohan'ny ny fifandraisanareo? Mety ho ianao sy ny namanao rehetra ny tsirairay, mifampitantana amin'ny fotoana rehetra, nanao hoe: ela, goodbyes liana amin'ny faran'ny daty, ary namihina tsirairay amin'ny zava-drehetra. Hamelombelona ny andro taloha kokoa amin'ny fahazoana fitiavana amin'ny mpiara-miasa. Hanampiana sy mihazona tanana amin'ny namanao rehefa mandeha midina an-dalambe, milalao footsies ambanin'ny latabatra amin'ny sakafo hariva, ka omeo ny havanao oroka lava goodnight tamin'ny faran'ny ny daty.
Kokoa ara-batana mahazo afaka tokoa manampy hamelona olon-tiany izay efa mihena. Mety ho, ny mpiara-miombon'antoka dia haka amin'ny famantarana sy hamaly kosa tia sy ny olon-tiany amin'ny.
3. Mandehana amin'ny Trip ny roa
Dia tena mora ny mamela ny fiainana andavanandro hitondra any amin'ny lalan'ny olon-droa fifandraisana. Ianao indraindray marina ny ho tahaka ny tsy manam-potoana ho an'ny olon-tiany. Ny fomba lehibe afa-maina amin'ny zavatra rehetra ity ary hifantoka amin'ny fanorenana fifandraisana anao dia amin'ny alalan'ny fanaovana dia lavitra miara-. Mikasa ny vakansy na faran'ny herinandro getaway (miankina amin'ny habetsahan'ny fotoana tsy maintsy hiantra) izay mitaky be dia be ny fotoana fialam-boly tsy miankina ary ny anankiray teo iray fifandraisana. Angamba ny faran'ny herinandro amin'ny Spa na herinandro amin'ny nosy mafana dia hanao ny fitaka.
Raha toa ka ny fiainana isan'andro dia tsy mifantoka anao avy amin'ny mpiara-miasa, afa-mandositra ny fanelingelenana amin'ny alalan'ny ara-bakiteny izany afa-maina amin'ny rehetra. Afaka manao izany ho an'izao tontolo izao ny fifandraisana tsara sy miala voly ny samy ianareo. Dia mandany ny fotoana samy mifantoka amin'ny, Tsy mifantoka amin'ny asa, am-pianarana, na fianakaviana olana.
4. Omeo ny Gift
Tsarovy, satria efa snagged ny lehilahy na ny vehivavy, tsy hoe afaka intsony wooing azy. Misy lehilahy sy vehivavy mila ho mandrakariva ao amin'ny fifandraisana romanced mba mahatsapa hoe tia ary naniry. Ataovy namanao hahatsiaro ny fiarahana alohan'ny andro tamin'ny fanomezana azy fanomezana fankasitrahana. Gifts Tsy voatery ho tsaratsara raha tsy manana teti-bola ho azy ny. A sôkôla nitsangana, kely kely trinket, na ny CD nanao ny toerana tena tia hira dia afaka manao ny tetika.
Mazava ho azy fa fifandraisana mafy mihoatra zavatra ara-nofo sy ny fanomezam-pahasoavana, fa, raha toa ka olon-tiany no izay tadiavinareo ny hanorina indray, Mety ho fanomezana izay tokony hahazo ireo fihetseham-po lovey dovey mikoriana indray. Aza miandry ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana na na. Ny fanomezana ny tsy misy antony intsony ny Packs fiantraikany noho ny fanomezana nandrasana.
5. Vao Mahazo Mampiaraka indray
Aza, Tsy hoe mivoaka sy hitady olona vaovao. Ny tiako hambara, hitondra ny havanao avy amin'ny daty indray. Olon-droa izay efa tao amin'ny fifandraisana nandritra ny ela be, indrindra fa ireo izay velona miara-, matetika manadino ny fomba mahafinaritra daty ireo dia afaka ho. Dia hiondrana an-Rut ny manao ireo zavatra ara-dalàna N nivoaka ny trano fisakafoanana mahazatra ny sakafo hariva, fanofana sarimihetsika, na nivoaka ny gilasy N fa tsy tsinontsinona ny herin'ny tena daty miezaka reignite olon-tiany.
Tany am-piandohana ny fifandraisana, Mahafinaritra mpivady maro mivoaka manao zava-baovao miara-. Tena mahafinaritra sy mampientam-po ho any amin'ny daty any amin'ny toerana izay tsy miara-. Andramo ary hanao izany indray. Tsy vitan'ny no mitranga daty any amin'ny toerana vaovao sy ny fiaraha-mientana mahafinaritra miaraka hanampy hanarina olon-tiany, dia hanampy ihany koa ny fotoana tsy hay hadinoina hamorona vaovao miaraka mba Saintsaino ireo taty aoriana.
Tsarovy, fifandraisana mila kolokoloina mandrakariva, ary nanatrika ny mba hitandrina ny olon-tiany fa hiredareda. Ireo soso-kevitra dimy mety hanampy anao miteraka fihetseham-po indray ireo tantaram-pitiavana, fa tapaka ny saina any amin'ilay namanao ny fieritreretana ny satan'ny ny fifandraisana na oviana na omena fotoana dia ilaina ny mitandrina ireo fihetseham-po mafana mirehitra tao ny anao sy ny mpiara-miasa.
4 Mahery fahazarana Of Happy Fifandraisana